By axadle Last updated Jun 4, 2020
Maamulka kooxda Chelsea ayaa qaaday talaabooyin layaableh oo dhinaca suuqa ah waxayna haddaba u muuqdaan kuwo gacanta ku dhigay saxiixa gool dhaliyaha kooxda RB Leipzig ee Timo Werner kaas oo ay warbaahinta ugu caansani xaqiijinayaan in uu hadda heshiis u saxiixay kooxda Blues balse dhamaystirkiisa laga shaqaynayo.
Laakiin guuldarada suuqa ee ay Chelsea baday Liverpool waxaa hadda raacday dalab labaad oo ay u direen xidiga ay kooxaha waa wayn ee Yurub wada doonayaan ee Jadon Sancho. Maamulka Stamford Bridge ayaa bilaabay ishubaynta xili ciyaareedka soo socda iyaga oo lacago badan suuqa galinaya.
War hadda soo baxay ayaa sheegaya in maanta ay Chelsea dalabkii labaad u dirtay kooxda Borussia Dortmund si ay uga hesho saxiixa xidiga ay Manchester United iyo Liverpool doonayaan ee Jadon Sancho.
Dalabka Chelsea ee lagu sheegay in uu yahay midkii labaad ayaa ah mid ku qiimaysan 70 milyan gini laakiin waxaa haddaba la ogaaday jawaabta kooxda Borussia Dortmund ay dalabkan ka soo bixisay.
Borussia Dortmund ayaa iska soo diiday dalabkii labaad ee ay Chelsea ka gudbisay Sancho kaas oo 70 milyan gini waxaana lays waydiinayaa in Blues ay adeegsanayso awood dhaqaale iyada oo kooxaha kale ay ka cabsi qabaan in saamaynta farayska karoona ay kooxahooda dhibaato ku noqoto haddii ay saxiixyo lacago badan ah sameeyaan.
Liverpool oo waqti dheer lala xidhiidhinayay saxiixa Werner isla markaana la xaqiijiyay in uu xidigani Anfield si wayn u doonayay ayay Chelsea talaabo deg deg ah qaaday si ay uga faa’iidaysato waqtiga lacagta heshiiskiisa lagu burburinayaa ayna kordhin oo ah June 15.
Liverpool ayaa ka cago jiiday in ay heshiiska Werner dhamaystirto iyada oo hore lavatory shaaciyay in maamulka Anfield ay dalbadeen waqti dheeraad ah oo ay xaalada farayska ku qiimayn karaan dhaqaale ahaan saamaynta uu yeesho waxaana sidoo kale la ogaa in Werner uu si cad u doonayay in uu Klopp la shaqeeyo.
Balse dalabka Chelsea ayaa noqday mid ay kooxda RB Leipzig aqbashay iyada oo la filayo in maalmaha soo socda la ogaan doono qaabka uu heshiiskani ku dhamaystirmi doono.
Haddii sida hadda la shaaciyay uu heshiiska Werner ee Chelsea uu dhamaystirmo isla markaana ay dagaalka Sancho ku guulaystaan waxa Blues noqon doontaa koox xili ciyaareedka cusub xoog badan la soo laaban doonta maadaama oo Hakim Ziyech uu haddaba yahay saxiixa kowaad ee la sii shaaciyay bishii January ee xagaaga imandoona.
Xidiga ay Chelsea dalabkii labaad oo 70 milyan gini ah ka gudbisay ee Sancho ayay kooxda Dortmund ku qiimaynaysaa 100 milyan halka ay qiimo aan la sheegi karin hore ugaga heshay Man City oo hadda ka shalaynaysa go’aankii ay da’yarka reer England ugu faro adaygi wayday.
Man United iyo Liverpool ayaa markii hore ahaa labada kooxood ee ugu cad cadaa saxiixa Sancho kaas oo wacdaro xili ciyaareedka ka dhigaya horyaalka Jarmalka, laakiin Chelsea ayaa safka hore soo gashay waxayna doonaysaa in ay xidigan keento Stamford Bridge.
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa qaaday talaabooyin kooxaha Liverpool iyo Manchester United walwal ku abuuraysa isla markaana ay hadda diyaar ugu yihiin in ay Sancho kaga hor maraan.
axadle 2989 posts